Mashandisiro ekushandisa iyo WhatsApp States: maitiro ekushandisa iro basa rayo | IPhone nhau
Nezuro takazivisa kuuya kwepamutemo kweWhatsApp States kuIOS, iro basa nyowani rinochinja rinozivikanwa re Instagram uye Facebook nyaya kune inonyanya kufarirwa meseji application. Nenzira iyi, imwe mikana yakawanda inomuka kana zvasvika pakugovana mune zvakanyanya kuomarara pane izvo zviripo zvinoratidza zvatiri kuita. Pane ino chiitiko, Facebook yasarudza kudaidza "Nyika" izvo zvatagara tichiziva se "Nhau" pane ese Instagram neFacebook. Asi chinhu chakakosha ndechekuti isu tizive mabudiro kubva pane iri nyowani basa iro iro WhatsApp rinotipa kwatiri. Gara uye unakirwe negwara redu nezvose zvaunoda kuti uzive nezve WhatsApp States.
Isu tiri kuenda kuzoita ongororo yekuti ndeapi makuru mabasa eWhatsApp States uye pamusoro pezvose kuti vazive zvavari. Usasiyiwa uine kusahadzika kwekuti shamwari yako yaisanganisira sei iyo inotonhorera GIF, kana nemagadzirisiro aakaita iyo pikicha kuti ive inonakidza kwazvo. Mushure mekuverenga gwaro iri hauzove nekusahadzika kamwechete pamusoro pekuti zvinoshanda sei, ndizvo chaizvo zvatinoda, saka ngatiendei ikoko.
1 Ndeapi WhatsApp mamiriro?
2 Ini ndinogadzira sei yangu WhatsApp Status?
3 Ini ndinogadzirisa sei angu WhatsApp mamiriro?
4 Sei kusarudza ndiani angaone angu WhatsApp statuses?
5 Imwezve tsananguro nezve WhatsApp mamiriro
Ndeapi WhatsApp mamiriro?
Iri idzva reWhatsApp basa rinotibvumidza isu kuburitsa ipapo mapikicha, maGIF nemavhidhiyo madiki ayo acharamba akamira kwemaawa makumi maviri nemana, kuitira kuti vese vaunofambidzana navo vagovaona, mune rimwe rematabvu maviri matsva anowanikwa pasi pe desktop ye iyo app. Tinogona kugadzirisa mapikicha aya mune zvakangofanana nenzira yatakaita ne Instagram. Kana kubatwa kwacho kwatorwa, isu tinongofanirwa kubaya pane bhatani rekutumira, rakafanana neiro riri mubhokisi remavara.
Kuti uone WhatsApp mamiriro ekutaurirana kwako, iwe unofanirwa kuenda kune iyo nyowani tebhu "Nyika", uye vashandisi vakaisa yavo Mamiriro ezvinhu vanozoonekwa, nekungodzvanya pikicha yavo ivo vanobva vatanga kutamba yakazara skrini otomatiki.
Ini ndinogadzira sei yangu WhatsApp Status?
Hazvaigona kuve nyore, WhatsApp yawedzera maviri matsva tende mumenyu yekutanga, muchikamu chepakati tinogona kuona «Kamera», iyo inotibvumidza kuti tikwanise kuisa ipapo Chinzvimbo, kana enda ku States tab iri muzasi kuruboshwe kwekutanga.
Kana isu tikasarudza kamera, isu tinongofanirwa kumanikidza nekutora iyo kutora sezvataizoita nechero imwe pikicha. Kana tikapa bhatani rekubata bata zvishoma, isu tinotora pikicha, uye senge muInstagram, tikadhinda nekubata bhatani, isu tinokwanisa kutora vhidhiyo diki. Tichavawo nesarudzo yekusarudza chero pikicha kubva kuiri reel, sekunge isu takagovana pikicha nechero ipi yedu WhatsApp meseji. Izvo hazvitombove zvakakodzera kuti pikicha yatorwa mumaawa makumi maviri nemana apfuura, chinodikanwa chakakosha mune kumwe kunyorera.
Ini ndinogadzirisa sei angu WhatsApp mamiriro?
Kugadzirisa kuri nyore sezvaungafungidziraMukona yekumusoro kurudyi tichawana mabasa akasiyana, isu tichava nepenzura chaiyo iyo ichatibvumidza isu vaviri kudhirowa uye ku "pixelate" chikamu chemufananidzo watiri kuda. Kune rimwe divi, isu tichava nesarudzo yekuwedzera zvinyorwa, zvakare muchikamu chepamusoro kurudyi, isu tinongofanirwa tinyore pabhii "T" uye bhokisi remavara richavhurika, neminwe miviri tinogona kuchinja saizi yayo, kuidhonza uye kunyange kuitenderera.
Kana zviri zveEmojis, isu tichafanirwa kudzvanya pane icon inowoneka padhuze ne "T" uye zvese zvirimo zvichavhurwa muEmoji. Sarudzo mbiri dzekuwedzera ndedze kutenderedza pikicha, uyezve nekudzosera bhatani, yatinogona kugadzirisa nayo zvatakarongedza.
Sei kusarudza ndiani angaone angu WhatsApp statuses?
Iko kutarisa kunotarisa. Chekutanga pane zvese tinozivisa kuti nekutadza ivo vanozoona chete edu eApp States States, avo vashandisi vatakaisa mune yedu yekudyidzana runyorwa, chimwe chinhu senge zvaitarisirwa kare kune vashandisi vaigona kuona chimiro chedu uye yedu yemufananidzo mufananidzo.
Muchikamu chimwe chete che "Nyika", bhatani rekumisikidza rakabvumidzwa kumusoro kwekuruboshwe izvo zvichatibvumira kugadzirisa zvakavanzika zveedu WhatsApp States:
Vandinoshamwaridzana navo: Chero ani isu takawedzera kune ajenda anozokwanisa kuona Nyika dzedu.
Vangu vokukurukura kunze kwekunge: Sarudzo yakanakisa kana tichida semuenzaniso kuti hama dzedu dzisingaone mamiriro edu, tinogona kusarudza vashandisi vatisingadi kuti vaone.
Ingogovana na: Chaizvoizvo zvakafanana neiyo yapfuura, asi imwe nzira yakatenderedza, isu tichakwanisa kusarudza rakasarudzwa boka revashandisi vanozokwanisa kuona Nyika dzedu.
Imwezve tsananguro nezve WhatsApp mamiriro
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha inyaya yekuti Tichakwanisa kuona kuti ndevashandisi vakave neziso ravo paWhatsApp States yedu. Kune izvi isu tinongofanirwa kuenda ku States tab uye kunoona zvedu. Muchikamu chepazasi chepakati tichaona museve unotibvumidza kutora menyu ekudonhedza ayo anozotizivisa kune avo vakaona mamiriro edu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro aungaita WhatsApp statuses: maitiro ekushandisa iro basa
Ichi chinyorwa (senge mamwe maPhones azvino) chinotaridzika zvakanyanya seichi chakatogadzirwa muapplesfera: https://m.applesfera.com/tutoriales/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-los-estados-de-whatsapp-en-el-iphone-como-utilizarlo-y-configurarlo
Se "tsananguro" yekutaura kuti inotoshandisa chimiro chakafanana, kunyangwe ichisiyana zvishoma zvekuti haisi "mucheki."
- Musoro wacho hauna kufanana
- Mifananidzo ndeyavo
- Iwo marongerwo acho akatosiyana
- Iyo yaunoti ine zvikamu zvitatu, yangu 3
- Hapana H2 machisi
- Dhizaini yacho yakatosiyana
Ivo havaigona kuve vakasiyana zvakanyanya pachokwadi, tichifunga kuti ivo vanotaura nezve zvakafanana mashandiro uye zvakafanana mabasa, kunyanya nekuti hapachina. Kana zvauri kureva ndezvekuti Applesfera chete ine kodzero yekuita zvidzidzo paWhatsApp Status, ndine hurombo, asi izvi hazvishande zvakadaro.
Kana iwe uchizoita kushoropodza kwakafanana neichi, ndinokukumbira kuti uwedzere nharo zvakare nekuti dzinowira pasi pehuremu hwavo. Muchokwadi, hazvigoneke kucheka-kunama nezvakawanda zvirimo pane chinyorwa icho icho chakateedzerwa, nekuti ipapo chingave chisiri chekucheka.
Kwazisai, ndinokutendai nekutiverenga uye nekutizivisa nezvevamwe vatinoshanda navo, izvo kubva pano ini ndinotora mukana wekukwazisai nekukukorokotedzai nebasa renyu 😉
Iwe murume, iwe waingoda kuti uzviite sezvazviri. Zviri pachena kuti kuitira kuti zvisaite senge zvakafanana, unozvipatsanura kubva kuzvikamu zvitatu kusvika zvishanu, kana uchida ini ndinogona kuzvinamatira pano zvizere uye tinofananidza nerumwe ruzivo rwamunopa. Kana kusvika pamapoinzi matatu ehupombwe iwe waita zvakafanana ...
Nezve iko kwekutanga kutaura: Ndeupi rudzi rwe "rumwe ruzivo rwunogona kupihwa"? Nekuzviziva. Nharo dzako hadzina chinhu uye dzinoshaya chinangwa. Zvisinei, ini handiite senge iwe unonzwisisa, nekuti iwe unoti iwe "unotukwa" ipo pasina nguva yave. Nharo dzako dzakanzi dzakapusa, izvo zvairi. Muchokwadi ndinokuburitsa mukukahadzika, havaite kunge akafanana, VANOTAURA ZVAKANYANYA ZVAKAFANANA. Muchokwadi, ini ndinokurudzira kuti iwe utarise pazvikamu uye uone kuti yakanyorwa se "Gwara kana dzidziso". Zvinoenderana nedzidziso yako, zvingave zvakakodzera kutarisa pakutanga kwenhoroondo yeinternet yezvidzidzo pane chimwe chinhu, uye kubvisa zvese izvo zvakaitwa mumashure ...
Nezve chirevo chechipiri: Ndinozvidemba kukuzivisa kuti ini handisi mudiwa wako, nekuti isu hatigovane chero eaya maviri emabasa andinoita.
Nezve chirevo chechitatu: Mhinduro iri kumusoro kwekutaura, nekuti haigone kuverengerwa seinotsoropodza. Nekudaro, pano tiri kutaura nezve tekinoroji, kwete nezve "munhu wangu."
PS: Nezve nzvimbo dzekuvanzika, ndiwo mikana mitatu inopiwa neWhatsApp, hapachina, sekuziva kwaunoita iwe kupfuura shamwari yeimwe webhusaiti uye ini ndisingazive.
PD2: Kutsoropodza kunovaka: ongorora zvirimo uye kuraira nzira yekuvandudza. A "_________________________" mhosva yekunyepedzera dzidziso.
Ini ndinonongedza kwauri kubvira nehungwaru hwangu "hupfupi" ini handikwanise kuzviita kuti ndinzwisisike pamberi pemunhu ari pamusoro anokwanisa kutsvagisa nekupa maonero ndisingazive.
Ini handisi kuti kune zvimwe zvakavanzika zvingasarudzika kupfuura zvitatu zvinoiswa neWhatsApp, asi zviripachena, sekuona kwawakaita muchinyorwa chandakabatanidza nezvakamboitika, unonangana nenzira imwe chete, nemhando imwe chete, uye wotosimbisa iyo mazwi akafanana muchivindi (Hongu, ndinoziva kuti zvakangoitikawo uye kuti ndiri murongi wemhirizhonga uye kuti nzira ye vignetting nekusimbisa mazwi haisi yeapplesfera chete).
Ndine urombo kuti ndiwe wega muunyanzvi hwako kana kuti hunhu hwako hwakakwirira zvekuti haugone kuona kupfuura mablog auno "kurudzira" iwe.
Uye pakupedzisira, ndikuudze kuti kana iwe ukakumbira kungwara kwangu uye nharo dzako chete ndedze kukwidza kutanga kwenguva kuti varege kutaura chinhu, ndinogona chete kukoka vashoma kana vazhinji vakaverenga aya makomendi kuti vaende kune iyi link Ini handiwane chero chinhu ini ndiri muteveri akapusa sezvandiri peji rino) uye tarisa nemeso ako zvandinotaura.
Pasina imwezve ado, ini ndinokushuvira zvakanakisa sezvo munhu asingararame chete kubva kumablog uye makopi.
Kwaziso shamwari, kana kana uchida shamwari.
(Nyora zvaunoda sezvo ini ndisiri kuzopinda iyi link zvakare, hapana chinhu chinondifadza).
Sezvo muActualidad iPhone isu hatifarire kuti vaverengi vedu vanotambura zvikanganiso, ndinodzoka kekupedzisira kukufumura nenzira yekukakavara nei kushoropodza kwako kusinganzwisisike. Uye sezvo zvingangove zvakasiyana newe, ini ndiri gweta, ndiri kuzokutsanangurira kuti sei uchitaura nhema uye ndinokukoka kuti urege kuzviita.
CHEKUTANGA-. PAMUSORO PEZVIRI MUKATI WENYAYA IYI: Izvo zvirimo muchinyorwa igwara rekuti ungashandise sei WhatsApp zvimiro. Nhungamiro yekuti ungashandisa sei sarudzo inowanikwa pachena kune chero mushandisi. Naizvozvo, zvinyorwa zvirimo hazvina mavambo, nekuti hapana sosi inogona kupa ruzivo rwakadai, uye ruzivo urwu runowanikwa kune vanopfuura mamirioni mazana mashanu evashandisi anofarira WhatsApp.
Nenzira iyi, Unofanirwa kutsamwa uye woenda kumatare edzimabhizimusi ari padyo kuti unomhan'arira zvinotevera zvinyorwa izvo zvinogona kuoneka mune yakapusa online yekutsvaga chishandiso senge Google, inoita kunge isingazivikanwe:
- VaSpanish: http://omicrono.elespanol.com/2017/02/estados-de-whatsapp-trucos-y-guia/ yomusi wa 22/02
- NZVIMBO YENYAYA: https://www.movilzona.es/2017/02/22/guia-de-uso-del-nuevo-whatsapp-estados-contactos-camara-y-mas/ yomusi wa 22/02
- Andro4All: https://andro4all.com/2017/02/estados-de-whatsapp-asi-funcionan izvi zvinobva pa21 / 02 ingori HORA RIMWE PASHURE peyako 😉
- Xakata: https://www.xataka.com/aplicaciones/guia-para-aprender-a-usar-whatsapp-status-como-sacarle-el-maximo-partido Zvino iyi inobva kuXakata, iro boka rimwe chete seApplesferea, iro rebhurogu rebhuroti, kubva pazuva rimwe chetero, uye rakanyanya kuwanda kupfuura rako.
Saka zana zana dzidziso pane internet. Iwo ma tutorials HAAGONESWE KOPI nekuti iwo haasi epakutanga zvemukati, emanyora ekushandisa emabasa.
Izvo chete zvinokwenenzverwa zvemukati zvingave mufananidzo wakaiswa kuseva, semuenzaniso, pane yedzidziso sampuro, izvo zviri pachena kuti hazvina kuitwa. Muchokwadi, sezvazviri mune zvemukati, iyo dzidziso inopomerwa kubiridzira ine ZVIMWE ZVIMWE ZVINOKOSHA MIFANANIDZO YEMAHARA NEZVO ZVIRI MUKATI izvo zvinofungidzirwa kuti zvakabirirwa dzidziso, zvisina maturo nemazwi ese.
SECOND.- ZVEKUITA KUSIMBISA KWEDZIDZO: Iwe unopomera kubiridzira mumamiriro ekuvandudza. Kana tikatarisa kuti yangu ine zvikamu zvishanu, uye yako ye5, funga mutsauko pamwe nekuwedzera kwe40% yakafanana. Kuverenga kuri nyore.
CHECHITATU- PAMUSORO PENYAYA YEKUSAPA KWEMAHARA UYE MABHUKU ECHOKWADI: Zvekare hazvisi chete zvisina hwaro asi zvinogumira pakushaiwa ruremekedzo, ndinokusiira mashoma ekutanga zvinyorwa zvangu kuitira kuti ugotarisa, pakati pawo paunowana mavhidhiyo akati wandei, dzidziso, zvinyorwa uye ongororo zvandakave nenguva kunakidzwa nekuita. mumakore maviri andanga ndichizvipira kuita izvi sekutandara.
Iyi ndiyo chete mienzaniso mitatu yekutanga inoratidzwa neGoogle nezve iPhone News, kunyangwe iwe uchange uine akawanda akawanda mu http://www.ActualidadGadget.com kwandino fara kuenda kuzviitiko zveHuawei, Parrot, Movistar, Logitech, Samsung, Wolder, SPC ... kuti ndikwanise kuzivisa vedu varavi vane mutsa nezviriko ZVEMAOKO.
- CHECHINA: ASI KUFOMU Kubva pachikamu che "Zvekuvanzika", ndine urombo kuti iwe hauzive kuti iro remukati gadziriso rakapihwa nechikwata rine zvarinogumira, uye harisi iro chaizvo Microsoft Word 2016, iri muchimiro chakafanana neCHIMWE CHIMWE chinyorwa pane ino webhusaiti, uye mune mamwe akawanda. Zvekare, kutaura nekusaziva kune njodzi zvakanyanya.
Nhaurwa yavo CHETE ndeyekuti maApplesfera "dzidziso" akauya pekutanga., Ini ndinokukoka iwe kusiyanisa nguva yako pakati pe20Minutos, ElEspañol, Andro4All, Xakata pachayo (webhusaiti yamai vaApplesfera), Movilzona ... nezvimwewo kwandisingazive kuti wakapa mhosva yakafanana.
Icho chokwadi chekuti kupomedzerwa kwake kwaive kusina hwaro uye rusununguko kwaive pachena panguva iyo iye asina kupindura chero yemibvunzo yakabvunzwa nezvazvo.
Pasina zvimwe, Ndinovimba izvi zvakubatsira iwe kuti unzwisise zvakajeka kuti nei kupomerwa kwako kusinganzwisisike, uye ndinotora mukana uno kupembedza chero kusanzwisisana kunogona kuitika kungave kwakaita kuti unzwe uchitukwa. Kunyangwe ini ndichida kuratidza kuti kana iwe ukatuka basa nehungwaru zvevamwe pasina nharo, iwe uri panjodzi yekutukwa mukupindura.
Ndinomushuwira zvakanaka zvakare, ndinofara kwazvo kugona kupembedza nei murume uyu anonyora, asingararame nemakopi, uye achinyatsoziva zvaari kutaura nezvazvo. Rimwe tariro rinoda avo vakajaira kupomera zvisina musoro, Rangarira kuti rusununguko rwekutaura rune miganhu panotangira kodzero dzevamwe vanhu.
Pasina imwezve nguva ini ndinobvisa, nekuti "tempus aurum est", uye yangu haina kushomeka, kuirasa mune yakadaro nyaya.
dzikama, ingori whatsapp status, pane zvinhu zvakakosha, zorora.
Pindura kuna euyeni
Ndinokutendai nekubvumirana neni. Ndiri kuenda kuapplesfera. Kwaziso.
Dzidziso yakanaka kwazvo, chokwadi chaita kunge chakazara kwazvo. Ndinovimba mamwe mameseji maapplication anodzidza nekuaitawo zvakare.